အမုန်းစကားက လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခကို လက်နက်သစ်များအဖြစ် အားဖြည့်နေ။ – Network Media Group
အမုန်းစကားက လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခကို လက်နက်သစ်များအဖြစ် အားဖြည့်နေ။
တရုတ်နယ်စပ်တလျှောက် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းက ဒီရွာတွေက ရွာသူ/သားတွေအတွက်ကတော့ သေနတ်သံနဲ့ အမြောက်သံတွေက အသစ်အဆန်း မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူတို့အတွက် အသစ်ဖြစ်နေတာကတော့ စွမ်းအား ပိုပြီးမနည်းလှတဲ့ စစ်တိုက်နည်း အသစ်တမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ ရဖို့ ခက်ခဲတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ရုန်းကန်နေတဲ့ နိုင်ငံမှာ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုတွေ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ကွဲပြားစေတဲ့ အွန်လိုင်း တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမှာရှိတဲ့ ရွာသားတွေ အတွက်သာမက အနီးပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်တဲ့ ကျောက် မဲ၊ နမ္မတူနဲ့ လားရှိုးမြို့နယ်က ရွာသားတွေအတွက်က ယဉ်ပါးနေတဲ့ တိုက်ပွဲသံတွေဟာ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေ ဘုရားကျောင်းတွေကို ထွက်ပြေးခိုလှုံဖို့ အချက်ပေးတဲ့ အသံပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အွန်လိုင်းပဋိပက္ခကနေတော့ ထွက်ပြေးဖို့မလွယ်ကူလှပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ မတူကွဲပြားတဲ့ တိုင်းရင်းသား အုပ်စုတွေ အကြားမှာ ဆက်ဖြစ်နေတဲ့ စစ်နည်းဗျူဟာအတွက် စစ်တလင်းဖြစ်လာနေတာကတော့ လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာ လူမှုမီဒီယာ ဖြစ်ပါတယ်။
This story was published/produced throughagrant received for the Southeast Asian Press Alliance (seapa.org) 2018-2019 Journalism Fellowship Program, supported byagrant from the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights(OHCHR). The views expressed do not reflect the official opinion of OHCHR.
ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဖက်ဒရယ် အစီအစဉ် အပိုင်း ( ၅ )
တိုင်းရင်းသား ဘာသာအစီအစဉ် ( မြန်မာဘာသာ) ၃၀ – ၁၂ – ၂၀၁၈။